Tsara ny fanantenana ao amin'ny Vangölü Express Adventure! | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra atsinanan'i Anatolia65 VanTsara ny fanantenana ao amin'ny Vangölü Express Adventure!
06 / 12 / 2019 65 Van, Intercity Railway Systems, Railway, Faritra atsinanan'i Anatolia, ANKAPOBENY, Headline, TORKIA
fiandrasana ao anatin'ny vangolu Express adventure
Ny fitsangatsanganana Vangölü Express, izay nanomboka tamin'ny Janoary tamin'ny taon-dasa dia nitohy tsy nitsahatra nandritra ny taona. I Van, izay no faran'ny fitsangatsanganana dia lasa toerana mampiato ny mpandeha miaraka amin'ny tantarany, ny hatsarany ary ny toetrany. Interrail izay tonga miaraka mba hanomboka ny vondrona tanora dia nitombo rehefa mandeha ny fotoana, ary efa Torkia ekipa ho fantatry manerana an'i Torkia. Taorian'ny Fampitana Atsinanana dia tonga tany Van nihoby nandritra ny taona ireo tanora izay nirohotra nankany Vangölü Express.
Gazety ShahivanAraka ny vaovao avy amin'ny Meral Yildiz; Ny fitsangatsanganana Vangölü Express, izay nanomboka tamin'ny Janoary tamin'ny taon-dasa dia nitohy tsy nitsahatra nandritra ny taona. I Van, izay no faratampon'ny fizahan-tany, dia nanjary faran'ny fizahan-tany matetika indrindra amin'ny mpandeha miaraka amin'ny tantarany sy ny hatsarany ary ny natiora. Interrail izay tonga miaraka mba hanomboka ny vondrona tanora dia nitombo rehefa mandeha ny fotoana, ary efa Torkia ekipa ho fantatry manerana an'i Torkia. Taorian'ny Fampitana Atsinanana dia tonga tany Van nihoby nandritra ny taona ireo tanora izay nirohotra nankany Vangölü Express. Farany, ity taona lasa natao tao Van ao Torkia tamin'ny Septambra Gezginfest manerana izao tontolo izao sy ny ana hetsiny ny hevitra samy hafa ny toetra sy Travel tanora mpankafy tonga tao Van. Tamin'ny fahatongavan'ny vanim-potoana ririnina, dia tian'ny Vavy ny Vangölü Express ho lasa andry fizahan-tany. Marihina fa i Van no ho tanàna ankafiziny amin'ny fizahan-tany ririnina ary mitombo ny fahalianana ao Vangölü Express.
2017 no vaovao ankafizin'ny foibe hita tany amin'ny Lake Van Express, ny dia nanomboka tao amin'ny renivohitr'i Tatvan'a renivohitry ny mpandeha nandritra ny taona isan-karazany. Angamba ny lalana mankany amin'ny firenenao, angamba ny toerana vaovao hitrandrahana, mety hahaliana ny Atsinanana na ny fandehanana fotsiny. Van Lake Express dia manolotra dia lavitra an'izay mpandeha. Na mandry ianao na mipetraka, dia afaka mijery ny ondry miandry eny an-tendrombohitra ary maheno ny feony, mifoha amin'ny fiposahan'ny masoandro ary mijery ny toetra miovaova rehefa misotro ny kafeo ianao dia i Anatolia dia dia mahafinaritra mahafinaritra izay mandalo eo imasonao tahaka ny rakitsary sary. Vangölü Express, izay ny fandaharam-potoana mandritra ny taom-piasana 2017, dia aleony indrindra indrindra amin'ny volana ririnina. Vangölü Express, izay manome fotoana tsy hay hadinoina amin'ireo mpandeha amin'ny fomba fijery mahavariana, dia hitohy ny fandraisana mpizahatany amin'ity taona ity. Indrindra fa ny mpizahatany amin'ny vanl vanlla dia maniry ny hisintona fizahan-tany mankany Van miaraka amin'i Vangölü Express fa tsy ireo Iraniana izay mihena amin'ny fararano. Ny fizahantany fizahan-tany van miaraka amin'ny fanokafana ny vanim-potoanan'ny ririnina dia tokony hatao mba ho lasa tanàna ankafizin'i Van indray, hoy izy.
TUNÇDEMİR: TONGA IZAO IZAO, indrindra Amin'izao vanin'andro izao
Raha niresaka tamin'ny gazety ilaina, mpizahatany fizahan-tany, Abdullah Tunçdemir, ny 2 dia nandefa ny Vangölü Express tamin'ny taon-dasa, tonga amin'ny fandaharanasa ihany koa mba hanao ezaka hanampiana fientanam-po vaovao ho an'i Van, hoy ihany izy. 2 taona lasa izay dia vondron'olona tanora nanjary Vangölü Express Van izay nanampy ny fientanentanan'ny Tunçdemir nilaza, indrindra fa tamin'ny vanim-potoana ririnina dia nitombo ny fahalianana tao amin'ilay lamasinina. Ç Mba handaniantsika ny ririnina, mila ny Vangölü Express isika. Ilaintsika ny mitondra Vangölü Express amin'ny fandaharana toy ny Atsinanana Express amin'ny fampitomboana tsy an-kiato ny isan'ireo sariety. Mila izany isika, indrindra mandritra ny volana efa maty. Mila Vangölü Express isika mba ho velona amin'ny fizahan-tany ririnina
"NY VAN LASA MPANJAKANA NY FANJAKANA
Beyaz Ny Express Lake dia iray amin'ny sine qua non ho an'ny fizahan-tany Van ho antsika. Na eo aza ny anarany dia mitondra fahatsapana. Làlana nolalovany tao Ankara mandra-pahatongany tany Van, indrindra fa rehefa ririnina; Ny zava-misy izay mandalo an'i Keban, Elazığ, Bingöl sy Muş dia manome fomba fijery azy. Izao no fisehoan'ny dia iray izay feno sy feno. Ny tanjonay indrindra dia mazava ho azy fa ny hampahafantatra ny hatsaran-tarehy ao Van, fa mandra-pahatongan'izany fiaran-dalamby izany dia miala ao Ankara ary tonga ao Tatvan, dia ny toeran'ny hatsaran-tarehy amin'ny tanàna maro. Ho fanampin'izany, ny sary eto dia ampidirina bebe kokoa ary mahatratra olona maro kokoa amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny olona amin'ny alàlan'ny kaonty media sosialy ananany
"NY TENAN'ASA TANY dia MBOLA AZY ARY NY FAHAGANANA AZY IZANY DESERVES HAK
Ny filazana fa ny fidirana no antony manan-danja indrindra ho an'ny fizahan-tany, nilaza i Beyaz fa tokony hampitomboina ny isan'ny sidina mankany amin'ny Lake Van Express ary hoy izy: ler Ny zavatra tokony hatao amin'izao fotoana izao dia ny amin'ireo fanambarana izay nataoko teo aloha; tokony hampitomboina ny isan'ny sidina, tokony hampitomboina sy hampiakarana ny isan'ny sarety. Raha jerena fa lafo dia lafo ny fiaramanidina, dia ny lamasinina dia tena lafo vidy sy mora vidy. Raha te hampiasa izany, mazava ho azy, roa andro isan-kerinandro dia tsy ampy ho anay. Ny lehibe indrindra amin'ny fizahan-tany dia ny fidirana. Mety tsara tokoa io toerana io fa raha tsy afaka mankany ianao dia tsy hisy dikany sy dikany izany. Zava-dehibe ny fidirana amin'ny fidirana. Indrindra amin'ny ririnina, misy ny fihenan'ny sidina. Indraindray na ny fiaramanidina aza dia azo foanana noho ny toetr'andro ratsy any amin'ireo faritany. Noho izany antony izany, ny lamasinina dia fomba iray fitaterana sy fizahan-tany. Tokony hodinihina amin'ny fomba toy izany ny fanomanana ilaina amin'ny haben'ny sidina sy andro maromaro. L.
Misy karazan-tsarety efatra miorina amin'ny Van Lake Express, mitovy amin'ny fomba hafa maneho: Pulman, Covered Bunks, Bed and Dinner. Ny sarety Pulman dia namboarina ho seza tokana amin'ny lafiny iray ary seza roa eo amin'ny ilany iray toa ny fiara fitateram-bahoaka. Azonao atao ny mandray ny biby fiompinao amin'ny alàlan'ny fandoavana ny antsasaky ny tapakilan'ny tapakila ao Pulman, izay no hany faritra nekena ny biby fiompy. Ireo sarety ireo dia matetika ampiasaina amin'ny elanelan-tany lavitra satria mila ora 25 eo anelanelan'i Ankara sy Bitlis. Amin'ity andiany ity, 2018 dia karama tsirairay amin'ny olona isan-taona amin'ny 47.
OAVITRANO MBOLA TOKONY NY VAVA
Ny sarety amina fiarandalamby no antonony indrindra dia ny sarety matory. Ny sarety amin'ny fiaran-dalamby indrindra, izay manana efitrano fandriana roa sy efitrano fandriana tokana. Koa satria ny sarety no lalam-bidy tena mahaliana indrindra, ao anatin'izany ny vata fampangatsiahana kely, latabatra famafazana ary hilentika, ireo izay te handeha amin'ity sarety ity dia tsy maintsy mividy mialoha ny tapakilan'izy ireo. Mety amin'ny mpivady, ny fiara dia manome anao sidina milamina. Ao amin'ny efitrano roa misy olona dia tsy maintsy mandoa 2018 lira ho an'ny taona 75 ary ho an'ny efitrano tokana dia tsy maintsy mandoa 91 lira. Ary ny karazana sarety izay azonao atao afa-mandany ampahany amin'ny dianao; nisakafo fiara. Rehefa noana ianao dia afaka mitsidika ny karety hisakafoanana, sotro, sakafo. Ny sarety hariva, izay safidy tsara ho an'ny dia lavitra, dia misy ny latabatra misy seza 4. Ary satria tsy ao amin'ny karazana efitrano ity dia manome tontolo iainana malalaka izy ary afaka mijerijery ny fomba fijery avy eo am-baravarankely.
STANO MPANJAKA VANANA
Ny toby voalohany amin'ny dia dia Ankara, fa noho ny asa fanatsarana ny lalamby dia nidina avy tao amin'ny gara Irmak, izay lavitra iray avy ao Ankara. Afaka mandeha irery ianao raha tianao, dia afaka tonga any Irmak miaraka amin'ireo serivisy miala ao 1. Satria ny andro fandehanana amin'ny lamasinina mandritra ny andro, dia afaka manomboka mijery ilay scénie ianao raha vao mandeha amin'ny lamasinina. Tena tsara ny matory sy miala sasatra amin'ny alina satria tsy hanana ny fotoana hijery ny sceneraly amin'ny alina ary tokony ho tsara mandry alina ianao raha te hijery ny jiro maraina voalohany sy ny fiposahan'ny masoandro. Ankoatr'izay, rehefa miala amin'ny lamasinina ianao hitrandraka ny distrika dia ho tombotsoanao ho tena mafy tokoa.
INDRINDRA VANGOLU MITADY NY FIVORIANA ETO
Ankara, Irmak, Yahşihan, Kırıkkale, Bişıh, Çerikli, Sekili, Yerköy, Caferli, Şefaatli, Sarıkent, Karasenir, Kanlıca, Yenifakılı, Himmetdede, Boğazköprü, Kayseri, Sarıoğlan, Karaöz, Matevina, rafitry, Sivas, Taslidere, Bostankaya, Yenikangal, Cetinkaya, Demiriz, Akcamagara, Akgedik, Hekimhan, Malatya, Battalgazi, Euphrates, Kussarayi, Pinarli, Baskil, hatsaram-panahy, Yolcati, Elazig, Yurt, Caglar, Muratbagi, Ekerek, Suveren, Young, Crane, Nurik, Solhan, Kale, Mus, Hotaksu, Rahova ary Tatvan.
TRAVEL 25 TRANO
Tokony ho 10-15 taona lasa izay, ireo fiaran-dalamby ireo dia tsy nahatsiaro tena ary feno olona be dia be, mpandeha no nijaly tamim-pamoronana. Koa satria tsy nisy famerana ny fiaran-dalamby, ny olona dia nisafidy ny dia tamin'ny lamasinina ary tamin'izany ny fitaovana dia nitondra ny fofona ratsy tao anaty lamasinina. Ankehitriny, ireo fiaran-dalamby ireo dia ampiasaina amin'ny fahafinaretana ary mahazo aina. Nandeha fiaran-dalamby niaraka tamin'i Doğu Ekspres dia nahatonga fampiononana vaovao izay fantatra amin'ity heviny ity. Raha vita ny tapakilanao sy ny fiomanana rehetra, 25 dia miandry anao mandritra ny adiny iray. Amin'ity dia lavitra ity dia azonao atao ny mamelona ny tenanao rehefa noana ianao amin'ny fihinanana sariety. Kars malaza indray amin'ny tanora izay mandeha eo amin'ny diany ity, izay amin'izao fotoana izao ao Torkia nokarakaraina sy manerana izao tontolo izao mba ho any Van tamin'ny fanomanana ny tanora.
60 INDRINDRA MITSANGANA, FARANY FARANY!
Ny fiaran-dalamby miala ao Ankara amin'ny talata sy alahady dia mandalo mivantana amin'ny gara 60: Irmak, Yahşihan, Kırıkkale, Bişıh, Çerikli, Sekili, Yerköy, Caferli, Şefaatli, Sarıkent, Karasenir, Kanlıca, Yenifakılı, Himmetdede. Bogazkopru, Kayseri, Sarioglan, Karaozu, Yenicubuk, Ihsanli, Sarkisla, Hanli, Gozmen, Bedirli, matevina, rafitry, Sivas, Taslidere, Bostankaya, Yenikangal, Cetinkaya, Demiriz, Akcamagara, Akgedik, Hekimhan, Malatya, Battal Lohataona, Baskil, Fangoraham-po, Yolçatı. Elazig, Yurt, Caglar, Muratbagi, Palu, Beyhan, Ekerek, Suveren, Genc, ​​Turna, Nurik, Solhan, Kale, Mus, Hotaksu, Rahova ary Tatvan. Aza eritreretina fa voafitaka i Van Lake Express ary nandeha tany Van daholo satria nifarana ny dia tao amin'ny distrikan'i Tatvan any Bitlis. Tatvan ampy fe-potoana farany sarety nitondra mpandeha anefa niresaka tena olana lehibe indrindra Torkia baka entana fiara, na amin'ny 20 afaka handeha fiara fitateram-bahoaka isan-in Van.
Ny dia mankany Vangölü
Fialamboly mahafinaritra miaraka amin'i Vangölü Express
Vangolu Express Flight Times sy ireo fifanarahana tapakila fiaran-dalamby
Filazana ny malemy: TCDD Vangölü Ferry Directorate ampiasaina amin'ny atrikasa bağlı
Filazana amin'ny Tender: TCDD T / F Rafet ÜNAL fidy an'i Vangölü Ferry Directorate azy
Fanamarihana Tender: Hatao arintany (TCDD dia mifandray amin'i Vangölü Ferry Directorate
Ny fatiantoka amin'ny alàlan'ny Tcdd Trains sy Vangölü Ferry Management Treasury…
Famaritana ny TCDD avy amin'ny Vangolu Ferries
Fampandrenesana Tender: Vangölü Ferries Directorate cleaning for ho an'ny fananganana administratif sy trano atrikasa…
Fampandrenesana fanehoan-kevitra: Vangölü Ferries ny fanamafisana ny serivisy sy ny serivisy